မနေ့ကချက်တဲ့ ဆိတ်ရိုးစွပ်ပြုတ် တင်လိုက်ပါတယ်နော်။ ခုတစ်လော ရုံးပိတ်ရက်ဆို ရာသီဥတုကလည်း ကိုယ်တော်ကြီးဘက် ပါပါနေတယ်။ အဟဲ ။ ဒီအပတ်ပါဆို ပိတ်ရက် ၂ ပတ် ဆက်တိုက်ရှိပြီ။ ပိတ်ရက် ဆို မိုးတွေကြီး လိမ့်ပိန့်ရွာနေတယ်။ မိုးလေးကလည်း အေးအေးလေးနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်တော်ကြီးလည်း အရည်သောက်မှ (ရေနွေးကြမ်း ပြောပါတယ်။ :D) ဖြစ်ပေတော့မည်။ ကိုယ်က အရည်ဦးအောင် တိုက်ထားမှ ဆိုပြီး ဆိတ်ရိုး စွပ်ပြုတ် အရည်သောက် ပူပူလေး လုပ်ပြီး တိုက်လိုက်ပါတယ်နော်။ ကိုယ်တော်ကြီးက မနက်တာ ရေနွေးကြမ်းသောက် လွတ်သွားပါတယ်။ ညနေတော့ ကိုကြီး ဒီဘီတို့နဲ့ အစည်းအဝေးရှိလို့ ချယ်ရီမေမှာ ရေနွေးကြမ်းသောက်လိုက်တာ သန်းခေါင်ယံမှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါရောလား။ ဒီလို ရာသီဥတု အေးအေးလေးနဲ့ဆို အရည်သောက် ပူပူလေးတွေ ချက်စားတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်နော်။ နောက်ထပ် အရည်သောက် ပူပူလေးတွေ ချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ မုန့်ဟင်းခါး၊ ကြာဇံဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ အာပူလျှာပူ (ခေါ်) ရခိုင်မုန့်တီ၊ မြေအိုး မြီးရှည်၊ စမူဆာ ပဲရည်သုပ် အဲဒါတွေ ချက်စားလည်း ရပါတယ်နော်။ နောက်ဆို သိပြီ ရေနွေးကြမ်းကြီးပဲ ကျိုကျို တိုက်ပလိုက်မယ်။ ဒီနေ့တော့ ဆိတ်ရိုး စွပ်ပြုတ် အရည်သောက်ပူပူလေးကိုပဲ အားမနာတမ်း သုံးဆောင်သွားပါအုံးလား။
မုန့်ဟင်းခါး ဒီမှာ တင်ဖူးပါတယ်နော်။
ကြာဇံဟင်းခါး ဒီမှာ တင်ဖူးပါတယ်နော်။
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဒီမှာ တင်ဖူးပါတယ်နော်။
အာပူလျှာပူ (ခေါ်) ရခိုင်မုန့်တီ ဒီမှာ တင်ဖူးပါတယ်နော်။
စမူဆာ ပဲရည်သုပ် ဒီမှာ တင်ဖူးပါတယ်နော်။
မြေအိုး မြီးရှည် ဒီမှာတင်ဖူးပါတယ်နော်။
ပြင်းတော်သိမ်ရွက် နိုင်းချင်းနဲ့ ကြော်ထားတဲ့ ကုလားဗယာကြော် မွှေးမွှေးလေး
ဆိတ်ရိုးရယ်၊ ဂျင်းရယ်၊ ကြက်သွန်နီ လေးခြမ်းစိတ်တွေရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ လုံးခွဲထောင်းရယ်၊ စပါးလင်ရယ်၊ ဆားရယ်၊ အချိုရယ် အရင်ဆုံး လုံးလိုက်ပါတယ်။
ဆိတ်ရိုး ၁ ကီလို
အာလူး ကီလိုဝက် (အာလူးကို မထည့်လဲ ရပါတယ်နော်)
ကြက်သွန်နီ ကြီးကြီး ၆ လုံး (လေးခြမ်းစိတ်ထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ ၁ ဥ (လုံးခွဲထောင်းထားပါ)
ဂျင်း လက် နှစ်ဆစ်စီ ၃ တက် (အခွံခွာပြီး ကျည်ပွေ့နဲ့ထုထားပါ)
စပါးလင် ၂ ချောင်း (အပေါ်အခွံခွာပြီး ကျည်ပွေ့နဲ့ထုထားပါ)
ဆိတ်ရိုးကို ရေ စင်စင်ဆေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီး ဇလုံထဲထည့် သံပရာသီး တစ်လုံးကို အရည်ညစ်၊ ဆားထည့်ပြီး နာရီဝက်လောက် နယ်နပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သံပရာသီးညစ်ရတာက အနံ မနံအောင်လို့ပါ။ ဆိတ်ရိုးကို နယ်နပ်ထားတဲ့အချိန် အာလူးကို အခွံခွာ ၂ ခြမ်းခြမ်းပြီး ရေစိမ်ထားလိုက်တယ်။ ရေစိမ်လိုက်တာက အာလူး အရောင်မမည်းသွားအောင်လို့ပါ။ ပြီးကြက်သွန်နီကို လေးခြမ်းစိတ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကို လုံးခွဲထောင်းထားပါ။ ဂျင်း အခွံခွာပြီး ကျည်ပွေ့နဲ့ထုထားပါ။ စပါးလင်ကို အပေါ်အခွံခွာပြီး ကျည်ပွေ့နဲ့ထုထားပါ။ ပြီး ဆိတ်ရိုးကို နောက်ထပ် ရေစင်စင်ပြန်ဆေးပါတယ်။ ပြီး ပြုတ်မယ်အိုးထဲသို့ ဆိတ်ရိုးရယ်၊ ဂျင်းရယ်၊ ကြက်သွန်နီ လေးခြမ်းစိတ်တွေရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ လုံးခွဲထောင်းရယ်၊ စပါးလင်ရယ်၊ ဆားရယ်၊ အချိုရယ် ထည့်ပြီး အရင်ဆုံး လုံးလိုက်ပါတယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက်ဆို အားလူးထည့်၊ ရေနွေးထည့်ပြီး နူးအောင်တည်ထားပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆိတ်ရိုး စွပ်ပြုတ် ပူပူလေး ရပါပြီနော်။
Posted by မိုးကောင်းသူ at 10:38 PM
Labels: ဆိတ်သားဟင်း, အရည်သောက်လေးများ
ဗယာကြော်ပဲက စက်နဲ့ ကြိတ်လိုက်ပုံ၇တယ်။ ညက်ညက်လေးရယ်။ ပျဉ်းတော်သိမ်လေးနဲ့ ဆို မွှေးနေမှာပဲ။ ဆိတ်ရိုးစွပ်လေး သောက်သွားတယ်။ :))))))))
ညီမ ချက်တာလေး က သပ်သပ်ရပ်ရပ် နဲ့ အရသာ ရှိမဲ့ပုံလေး စားချင်တယ်
ဘေးက ဆိုက်ဘား လေ ဟင်းအမျိုးအစားတွေ drop down box လေး ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြောပြပေးပါ
တီလဲ ဟင်းတွေကို အကုန် အဲ့လို လုပ်ထားချင်လို့
ဟင်းတွေအကုန်စုပြီးတော့ အဲ့လိုလုပ်ထားလိုက်ရင် တခါတခါ ပြန်ရှာ ချင်ရင် လွယ်မယ်လေ နော်
ဘလော့လဲ မ၀င်ဖြစ်လို့ တီချမ်း မေးထားတာ မသိလိုက်ဘူး။ ခုမှ ဖြေလိုက်ပါတယ်နော်။
ကျွန်မလည်း ကိုရန်အောင် ဘလော့ကနေ ယူထားတာပါ။ ကိုရန်အောင် ဘလော့မှာ သေချာ ရှင်းပြထားပါတယ်နော်။ (http://www.yanaung.net/2007/05/dropdown-menu-box.html)
အစ်မရေ ညီမလည်း အစ်မ က ကိုသဘောကျလို့ တစ်ခုယူချိတ်လိုက်တယ်။ ဆိုက် ညွှန်ပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
ဆိတ်ရိုးစွပ်ကို အာလူးမပါပဲ ချက်လိူ့မရဘူးလား။
Mai's Corner said...
Ma Ma Rice Cooker!
You gotareal cool blog. I also startinganew blog name "My Last Appetite" about foods (especially Burmese foods). Nice to meet you here.
Hi your blogs looks so impormative and interesting.would you come and visit us back too
Ko Htwe said...
Recipe Web site, Recipe iPad Apps များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိလို မေးလိုသည် များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ရန် Blog က မဟုတ်ပါဘဲ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လို့ ရနိုင် မနိုင် သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော့် gmail က kobaikpu နာမည်နဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စူရမ်ဘုရင်ရဲ့ တရုတ်ပြည် ခရီး (စင်္ကာပူ ပုံပြင်) - တခါတုန်းက အိန္ဒိယပြည်မှာ စူရမ်ဆိုတဲ့ ဘုရင်တပါး စိုးစံသတဲ့။ သူ့လက်ထက်မှာ အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပြီး ဘေးနားက နိုင်ငံငယ်တွေကို သိမ်း၊ သူ့ကို အခွန်တွေ...